Xasan Sheekh oo ku Eedeyay Farmaajo inuu dalka geliyay xaalad mugdi ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Madaxweynaha mudo xileedkiisu dhamaaday ee Farmaajo uu dalka galiyay xaalad hubanti la’aan ah oo horseedi karta mugdi.
Qoraal uu Xasan Sheekh soo dhigay barta uu Twitterka ku leeyahay ayuu ku sheegay in Farmaajo oo maanta mudo xileedkiisu ku egyahay dalka galiyay xaalad siyaasadeed oo mugdi galin karta mustaqbalka dalka.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo siyaasiyiinta kale ee mucaaradka ayaa horey uga digay in Farmaajo sameesto mudo kororsi, waxa ayna sheegeen in 8-Febraayo kadib aysan u aqoonsaneyn Madaxweyne sharci ah.
Farmaajo ayaa maanta ku beegan tahay maalintii la doortay afar sano kahor, waxaana mudo xileedkiisu dhamaaday xili wali aan loo diyaarsaneyn qabashada doorasho raali laga yahay uuna jiro khilaaf xoogan oo dib u dhac horseedi kara.